September 2017 – Page5– Thadin Media
ရခိုင်​​အ​ရေးနဲ့ပတ်​သက်​ပြီး UN က​ရော OIC ကပါ မြန်​မာကို စစ်​မက်​ပြုရဲမယ်​ ထင်​သလား
September 10, 2017 adminLocal News, Ploitical
[Zawgyi] ပြည်သူအများစု စိုးရိမ်နေကြတဲ့ ကိုဖီအာရ်နန် ရဲ့ အကြံပြုချက်ကြောင့် R2Pအရေးဖြစ်လာပြီး…. ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ပြည်ပ တပ်တွေ ဝင်သိမ်းသွားနိူင်တယ်ဆိုတဲ့အရေးက တကယ်လုပ်ရဲလို့လား……? ကျနော်တို့ အကြမ်းဖျင်းအားနဲ့ပဲတွေးရအောင်…. မြန်မာဆိုတာ အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့ နေတဲ့နိူင်ငံ စစ်တပ်မရှိ တဲ့နိူင်ငံမဟုတ်ဘူး…. မြန်မာ့စစ်တပ် ကမ္ဘာ့အဆင့် ၃၂ ရေတပ်အဆင့် ၁၅ လေတပ်အဆင့်က ဘင်္ဂလားဒေရှ့် ထက်သာတယ် အဲ့ဒါက GFP (Global Fire Power) ကမ္ဘာ့စစ်လက်နက် စာရင်းပြုတဲ့ အဖွဲ့ကြီးရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက် ခင်များတို့ သတိမထားမိတာရှိသေးတယ်….. အဲ့ GFP…
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်လ်ဆု ပြန်သိမ်းရန် မဖြစ်နိုင်ဟု ဆုပေးရေးအဖွဲ့ပြော
September 10, 2017 adminPloitical
[Zawgyi] ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၁၉၉၁ ခုနှစ်က ချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်လ်ဆုကို ပြန်သိမ်းဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ နိုဘယ်လ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု ရရှိသူတွေကို ရွေးချယ်ပေးတဲ့ နော်ဝေ နိုဘယ်လ်အင်စတီကျုက စက်တင်ဘာ ၈ ရက်နေ့မှာ ပြောပါတယ်။ ဆုရရှိထားသူတွေဆီကနေ ဆုတံဆိပ်ပြန်သိမ်းဖို့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလည်း ရှိမထားဘူးလို့ နိုဘယ်လ်ဆုပေးရေးအဖွဲ့က ပြောပါတယ်။ လတ်တလောမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရခိုင်ပြည်နယ်က နိုင်ငံမဲ့တွေဘက်က မရပ်တည်လို့ဆိုပြီး ဝေဖန်ပြစ်တင်နေကြတာပါ။ နိုဘယ်လ်ဆု ချီးမြှင့်ခံထားရပြီးသားသူတွေဆီက ဆုတံဆိပ်ကို ပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့ဆိုတာ နိုဘယ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှာ စည်းမျဉ်းဥပဒေတွေ မရှိသလို ဒီဆုကိုတည်ထောင်သူ အဲဖရဒ်နိုဘယ်လ်ရဲ့ ဆန္ဒလည်း မဟုတ်ဘူးလို့…
မြန်မာ့တပ်မတော်မှ ရေငုပ်သင်္ဘောသစ်တစ်စီးအား ထုတ်ဖော်ပြသ
[Zawgyi] မြန်မာ့တပ်မတော်မှ Typhoon Class အတန်းစား ရေငုပ်သင်္ဘောကို ထုတ်ဖော်ပြလိုက်ပြီး HMAS ThiHaPaTae လို့နာမည်ပေးရေချလိုက်ပါတယ်။ ရုရှားရေငုပ်သင်္ဘောများ၏ ကိုယ်ထည်ကို အခြေခံတည်ဆောက်ထားပြီး ရုရှားနိုင်ငံသို့ ပညာတော်သင် သွားရောက်ပြီးပြန်လည်ရောက်ရှိလာသော ပညာရှင်များမှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်လောက်မှ စတင်ကာ လျှို့ဝှက်စွာတည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် ပထမဆုံးပြည်တွင်းဖြစ် ကိုပိုင်နည်းပညာဖြင့်ထုတ်လုပ်လိုက်သော နည်းပညာမြင့် ရေငုပ်သင်္ဘောဖြစ်ကြောင်း အမည်မဖေါ်လိုသူ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလိတစ်ဦးမှ ပြောကြားထားပါတယ်။ အိန္ဒိယမှ ဝယ်ယူထားသော တော်ပီဒိုများတပ်ဆင်မည်ဖြစ်ပြီး အစ္စရေးထုတ် အာရုံခံစနစ်များနှင့် မြောက်ကိုရီးယားနည်းပညာဖြင့် ပြည်တွင်းမှာ ထုတ်လုပ်ထားသော လျှို့ဝှက်ဒုံးလက်နက်များတပ်ဆင်မည်ဟု ခိုင်လုံသောသတင်းရင်းမြစ်များမှကြားသိရပါသည်။ ခုလိုရေငုပ်သင်္ဘောများတည်ဆောက်နိုင်ခြင်းဖြင့် ပင်လယ်ပြင်ကာကွယ်ရေးသာမက…
တိုကျိုရှိ မြန်မာသံရုံးရှေ့တွင် ရခိုင်အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာအဖွဲ့နှင့် မွတ်စလင်ကုလားအဖွဲ့ အပြန်အလှန် ဆန္ဒပြ
September 9, 2017 adminLocal News, Political
[Zawgyi] ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျို မြို့ရှိ မြန်မာသံရုံးရှေ့တွင် အပြန် အလှန်ဆန္ဒပြ၍ ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာ ၈ ရက်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ မွတ်စလင် ၃၀၀ ကျော်သည် ရခိုင်ပြည်နယ်၌ ဖြစ်ပွားနေသော အရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး မြန်မာသံရုံးကို ဆန္ဒပြကန့်ကွက်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ ဆန္ဒပြကန့်ကွက်မှုကို ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေသော မြန်မာနိုင်ငံသား ၂၀ ခန့်က ရခိုင်ပြည်နယ်၌ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုများ မရှိကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး အစိုးရက လိမ်ညာပြောဆိုမှုများမရှိကြောင်း ရှင်းပြရန် တန်ပြန်ဆန္ဒပြခဲ့ကြောင်း…
[Zawgyi] ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၈ မြန်မာနိုင်ငံကို ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေသည့် ဆိုက်ဘာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသည့်အခြေအနေတွင် မြန်မာဟက်ကာများက တူရကီ တယ်လီကွန်း ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ငွေကြေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့် ယင်းတယ်လီကွန်းအသုံးပြုသူများ၏ ဘဏ်စာရင်းအချက်အလက်များကို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရယူထားနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်ဟု မြန်မာဟက်ကာအဖွဲ့ဖြစ်သည့် UGMH အဖွဲ့က The Voice နေ့စဉ်သတင်းစာ၏ ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုကို အတည်ပြု ဖြေကြားခဲ့သည်။ တူရကီ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှင့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံများမှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ Cyber Space ကို ပစ်မှတ်ထားကာ ဆိုက်ဘာစစ်ပွဲကြေငြာထားပြီး မြန်မာဟက်ကာများကလည်း တိုက်ခိုက်လာသည့် နိုင်ငံများ၏ နိုင်ငံပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ…